(Dhegeyso)Wararkii ugu dambeeyey ee Jiidaha dagaalka G Sool & Goobjooge ka waramaya | Puntland
(Dhegeyso)Wararkii ugu dambeeyey ee Jiidaha dagaalka G Sool & Goobjooge ka waramaya
Jun 11, 2018 - Aragtiyood
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool ayaa sheegaya in ciidamada maamulka Somaliland ay bilaabeen in ay dib uga baxaan deegaanka Tukaraq sadexdii maalmood ee lasoo dhaafay.
Maleeshiyaadka Hargaysa waxaa ay qaadeen inta badan hubkii yaalay buundada KUN JEER ANIGAA KU JECEL, waxaana buundadaas ay ahayd meesha ugu badan ee ay difaaca uga jireen.
Wararku waxay sheegayaan in ay Maleeshiyaadka maamulka Hargeysa welwel ka qabaan duulaan uga yimaada dhinaca Puntland, waxaana sidaas oo ku garowsaday Nuux Taani Ismaaciil in uu dib u dajiyo ciidamadiisa, gaar ahaana kuwii kusugnaa jiiddaas.
Qof katirsan dadka deegaanka Tukaraq oo gurigiisa soo eegayey ayaa sheegay in uu arkay ciidan aan dhameyn 50 askari oo kusugan buundada iyo meel difaac ah oo ay jeexeen Somaliland, isla markaasna u muuqatay in ay ka baxayaan magaalada Tukaraq.
Madaxweynaha Somaliland waxay ogaatay Puntlandtimes.com in ay cabsi xoog badan ka hayso duulaanka Puntland, uuna kacodsaday Urur Gobaleedka IGAD in ay damaanad qaad rasmi ah uga keenen maamulka Puntland, kaas oo ah in aysan uga daba imaan doonin deegaanka Tukaraq.
Puntland wey diiday aqbalida ka bixitaanka Tukaraq, waxayna sheegtay in Laascaanood, Tukaraq, Gambara, Adhi-Cadeeye, Yagoori & Gumbeys ay yihiin dhul Puntland oo aysan waxba gorgortan iyo tanaasul ah ka gali doonin, taas oo welwelka kusii badisay Somaliland.